अर्चना पनेरुको प्रेम कथा – नेपालि भिडियो ब्लग, पहिलो र एक मात्र
आफुले आफुलाइ पोर्न स्टार बन्ने भनेर नग्न फोटो र भिडियो सार्बजनिक गरिरहेकि एक युबतिले आफ्नो प्रेम कथाको बारेमा बताएकि छिन । भर्खर १७ बर्षकि यि युबतिले अहिले सम्म एउटा म्युजिक भिडियोमा मात्र अभिनय गरेकि छिन । अर्चनाले सोहि म्युजिक भिडियोमा उनको साथ अभिनय गर्ने महेश भट्टसंग प्रेम सम्बन्ध रहेको तर अहिले सो सम्बन्ध समाप्त भएको खुलासा गरेकि छिन । अर्चनाले दिएको जानकारि अनुसार, महेश नेपालि सिनेमामा नेगेटिभ रोल गर्ने पुश्कर भट्टका छोरा हुन । सो म्युजिक भिडियो पनि पुश्करकै कम्पनि आबिश्कार मिडिया ले निर्माण गरेको थियो ।
महेशका पिताले जुन ४ तारिखमा महेश र अर्चनाको फोटो राखेर “यो जोडि कस्तो लाग्यो, कमेन्ट गर्नुहोला। यदि यिनिहरुलाइ मनपराइदिनु हुन्छ भने आबिष्कार मुभि मेकर प्रा.लि. यहाँहरुको लागि चाँडै लभ स्टोरि फिल्म बनाउने निर्णय गर्ने छ ।” भनेर लेखेका थिए। सो फोटो “आफ्नै कुरा माथि …” शिर्शकको म्युजिक भिडियो शुटिँग गर्दाको थियो । सो म्युजिक भिडियो त्यसको ३ महिना पछि रिलिज भएको थियो । म्युजिक भिडियो को रिलिज् पुर्वनै अर्चनाको नग्न फोटो र प्रहरिको गिरफ्तारिका कारण उनको चर्चा चुलिइ सकेको हुनाले सो भिडियोले राम्रै दर्शक पाउन सफल भयो । अर्चनाको सो म्युजिक भिडियो यस अघि यहाँ पोस्ट गरिएको थियो।
अर्चनाले टुटेफुटेको अंग्रेजिमा आफ्नो प्रेम कथा एक अंग्रेजि कविता भन्दै शुरु गरेकि छिन । उनि भन्छिन, “म्युजिक भिडियोमा अभिनय गर्दा महेशले मलाइ प्रपोज गर्यो ।” उनलाइ उसको प्रपोजले खुशि बनायो र उनले पनि उसलाइ प्रेम गर्न थालिन । उनि थप्छिन, “उ मेरो पहिलो प्रेम हो र एकदमै महत्व्पुर्ण । पहिला अरु केटाहरुले प्रपोज गरे पनि मैले त्यति वास्ता गरेकि थिइन । तर, महेशसंग प्रेम गरेर मैले प्रेम के हो भन्ने थाहा पाएँ।”
एक दिन पुश्कर भट्ट अर्चनाको घरमा आएका थिए । अर्चनाको आमाले उनिहरुको प्रेमको बारेमा महेशको बुवालाइ बताइन । त्यो प्रेम कथाले पुश्करको बुवाले खुशि हुनु भएको थियो रे। अर्चनाका आमा छोरिले एसएलसि पछि एन्गेज हुने र ब्याचलर गरे पछि बिवाह गर्ने सम्मको योजना सुनाए। तर केहि दिन पछि महेशले भेटघाट कम गर्न थाल्यो । उसको परिवारको ब्यबहार परिवर्तन भयो । अर्चना भन्छिन, “महेश मेरो पहिलो प्रेम भए पनि म उ संग बिहे गर्न सक्दिन किनकि उसको परिवार धेरै नै पुरातन छ ।”
हुन त, नेपालि समाजमा पोर्न स्टार हुन्छु भन्ने केटिलाइ कसले पो बिवाह गर्न चहान्छ र ? अर्चनाको कुरा अनुसार उनले महेशलाइ छोडेकि हुन । तर, जसले जसलाइ छोडे पनि, सार्बजनिक रुपमा सजिलै नांगिने र सेक्स फिल्म खेल्छु भन्ने युबतिको रोमान्टिक प्रेम कथा कल्पना पनि गर्न सकिंदैन ।
यो प्रेम कथा वा बिछोडको कथा जे भने पनि, यस्को निचोड भनेको अर्चना अब सिंगल नै छन । हुन त उनि सिंगल हुनु र नहुनुले अरु युवतिको जस्तो फरक त नपर्ला, होइन र?
अर्चनालाइ यस अघि प्रहरिले पक्राउ गरेर नग्न फोटो शेयर नगर्ने शर्तमा रिहा गरेको थियो । तर त्यस घटनाको एक महिना पनि बित्न नपाउंदै उनले नग्न फोटो र भिडियो पनि शेयर गर्न थालेकि छिन । अर्चनाका तेस्ता फोटो र भिडियो उनकै आमाले खिच्ने र शेयर गर्न गरेको छिन । यो बारेमा बिस्तृत बिबरण यस अघि “अर्चना पनेरुलाइ पोर्नस्टार बनाउने आफ्नै आमाको सपना” शिर्षकमा पोस्ट गरिएको थियो ।
निम्न भिडियो प्रहरि कार्यालयमा खिचिएको हो, जसमा अर्चना र उनकि आमा सुनिता पनेरुले नेपालमा पोर्न भिडियो नबनाउने बचन दिएका थिए :
This entry was posted in Artists, People and tagged Archana Paneru. Bookmark the permalink.
← हलोइन नेपालमा पनि मनाइयो, यस्तो छ पश्चिमि प्रभावको उदाहरण
पुर्व युवराज पारस शाहको पुरानै पारा, लाजिम्पाटको त्रिसरा बारमा झगडा →
3 thoughts on “अर्चना पनेरुको प्रेम कथा”
hello hi realy you are beutiful